FCoin စျေး - အွန်လိုင်း FX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FCoin (FX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FCoin (FX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $13 835 351.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FCoinFX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00002FCoinFX သို့ ယူရိုEUR€0.00002FCoinFX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00002FCoinFX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00002FCoinFX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.000206FCoinFX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000146FCoinFX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.000511FCoinFX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00009FCoinFX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00003FCoinFX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00003FCoinFX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.000516FCoinFX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.000179FCoinFX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000125FCoinFX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00172FCoinFX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.00389FCoinFX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00003FCoinFX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00004FCoinFX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.000717FCoinFX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00016FCoinFX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.00246FCoinFX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.0273FCoinFX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.00884FCoinFX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0017FCoinFX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.000635
FCoinFX သို့ BitcoinBTC0.000000002 FCoinFX သို့ EthereumETH0.00000006 FCoinFX သို့ LitecoinLTC0.0000004 FCoinFX သို့ DigitalCashDASH0.0000003 FCoinFX သို့ MoneroXMR0.0000003 FCoinFX သို့ NxtNXT0.0018 FCoinFX သို့ Ethereum ClassicETC0.000003 FCoinFX သို့ DogecoinDOGE0.00666 FCoinFX သို့ ZCashZEC0.0000003 FCoinFX သို့ BitsharesBTS0.000711 FCoinFX သို့ DigiByteDGB0.000738 FCoinFX သို့ RippleXRP0.00008 FCoinFX သို့ BitcoinDarkBTCD0.0000008 FCoinFX သို့ PeerCoinPPC0.00008 FCoinFX သို့ CraigsCoinCRAIG0.0105 FCoinFX သို့ BitstakeXBS0.000984 FCoinFX သို့ PayCoinXPY0.000403 FCoinFX သို့ ProsperCoinPRC0.00289 FCoinFX သို့ YbCoinYBC0.00000001 FCoinFX သို့ DarkKushDANK0.0074 FCoinFX သို့ GiveCoinGIVE0.05 FCoinFX သို့ KoboCoinKOBO0.00526 FCoinFX သို့ DarkTokenDT0.00002 FCoinFX သို့ CETUS CoinCETI0.0666